कोटा छुट्ट्याएर ओपिडी चलाउँदै अस्पताल – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख २९ गते १६:२०
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अवरुद्ध भएको जनस्वास्थ्य सेवा सुरु गराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। तर, सरकारी निकायकै अस्पतालहरू अझै ओपिडी सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न भने नसकिने जनाउँछन् ।
लकडाउनसँगै सबैजसो अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द अवस्थामा थियो । ४८ दिनदेखि सवसाधारण स्वास्थ्यसेवा लिनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले ओपिडी सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिएसँगै कोटा प्रणालीबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी जानकारी गराए ।
लकडाउनले गर्दा धेरै बिरामी अस्पतालसम्म पुग्ने अवस्था भने अझै रहेको छैन । ओपिडीमा सेवा लिन आएका बिरामीलाई अस्पतालले दूरी कायम गरेर सेवा दिन जनाएको छ ।
करिब डेढ महिना स्वास्थ्यसेवाबाट मानिसहरू वञ्चित भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप सुरक्षा अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए ।
‘नन कोभिडका बिरामीले पनि जनस्वास्थ्यका हिसाबले पाउनुपर्ने सबै सेवा पाउनुपर्छ,’ डा. देवकोटाले भने, ‘अब अस्पतालहरूले संक्रमण रोग नियन्त्रणप्रति सावधानी र सुरक्षा अपनाएर अस्पतालमा ओपिडी सेवा सञ्चालन गनुपर्छ ।’
जनस्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत पोषण, मातृत्व, परिवार नियोजनलगायतका सेवा सुचारु गर्न मन्त्रालयले सम्पूर्ण अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो ।
ओपिडी सेवालाई कसरी अझै व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अस्पतालमा छलफल भइरहेको डा. सेन्चुरीले बताए ।
‘ओपिडी सेवा कोटा प्रणाली लागू गरेर सीमित मात्रामा सेवा दिने छौं,’ डा. सेन्चुरीले भने, ‘अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवाका लागि अस्पताल अहिले पनि जोखिम नै हुन्छ ।’
लकडाउन सुरु भएको (चैत ११ गते) भोलिपल्टदेखि नै अधिकांश अस्पतालले सेवा बन्द गरेका थिए । अन्य कारणले ज्वरो आएका बिरामीलाई कोरोनाको त्रास देखाउँदै सेवाबाट वञ्चित गराइएको घटनासमेत बाहिर आएका थिए ।
लकडाउन खुला नभएसम्म पूर्ण रूपमा ओपिडी सेवालाई दिन नसकिने त्रि.वि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेम खड्काले बताए।
टिचिङ अस्पतालले पनि दूरी कायम गरी कोटा प्रणालीबाट सेवा सुचारु गरेको छ । ‘सकेसम्म सेवा विस्तार गर्नेका लागि छलफल गर्दै आएका छौैं,’ डा. खड्काले हेल्थपोस्ट नेपालसँग भने, ‘तर अझै पनि जोखिम कायम छ, सबैलाई सेवा दिनसक्ने अवस्था छैन।’
सरकारले ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएसँगै बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। टिचिङ अस्पतालले हालसम्म ३ सय ४ जनालाई ओपिडी सेवा दिएको डा. खड्काले जानकारी गराए ।
ओपिडी सञ्चालन गर्नेमा अझै चुनौती रहेको डा. सेन्चुरीको पनि भनाइ छ। ‘अझै जोखिम कायम नै छ, त्यसका लागि पूर्ण रूपमा सावधानी अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उपचार लिन आउने बिरामी स्क्रिनिङको गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
ओपिडी सेवा दिँदा भीडभाड हुने र थप जोखिम बढ्ने देखिएको डा. सेन्चुरीको भनाइ छ । कोटा प्रणालीमा दैनिक कति बिरामीलाई सेवा दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘बिरामीलाई कोटा सिस्टममार्फत सेवा दिने सुचारु गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘पहिलाको जस्तै सेवा सञ्चालनका लागि बिरामी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ।’
अहिले वीर अस्पतालमा दैनिक ४ सयको हाराहारीमा ओपिडी सेवा लिइरहेका छन् । ओपिडीमा आएका बिरामीलाई हेर्नका लागि चिकित्सकले पिपिई लगाएर भए पनि सेवा दिने तयारी रहेको डा.सेन्चुरीले बताए ।
सिभिल हस्पिटलले दुई साताअघि देखि नै ओपिडी सन्चालन गरिरहेको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. दीर्घराज आरसीका अनुसार बिरामी तथा आफन्तको भीडभाड हुन नदिएर ओपिडी सेवा सन्चालन भइरहेको छ।
तर, अस्पतालले दाँतको ओपिडी भने अझैं सन्चालनमा ल्याएको छैन। बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म अरु सबै ओपिडि सेवा सञ्चालन भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ।
‘हामीले निकै सजकता अपनाएका छौं। बिरामीको भीडभाड हुन दिएका छैनौं’ डा. आरसीले भने ‘ओपिडी कक्षमा डाक्टरसँग एकजनामात्रै निश्चित दूरी कायम गरेर परामर्श लिनसक्नुहुन्छ।’ यो अस्पतालमा दैनिक २५० जना बिरामीले ओपिडी सेवा लिइरहेका छन्।